Izay rehetra momba ny fihinanana ranoka: ny fomba fiasa, ny fahombiazany ary maro hafa! | Nutri Diet
Ny sakafo misy ranoka dia iray izay manome ny kaloria rehetra (na ampahany tsara farafaharatsiny) amin'ny alàlan'ny zava-pisotro fa tsy sakafo mafy. Raha ny tokony ho izy dia misy proteinina, vitamina, mineraly ary gliosida mora levona, ary tavy kely ihany koa.
Matetika izy ireo dia ampiasaina alohan'ny na aorian'ny fandidiana. Inona koa, satria ambany kaloria matetika izy ireo, dia ampiasaina amin'ny fihenan-danja.
1 Inona no idirany?
2 Ampy sakafo ve izy ireo?
3 Milamina ve izy ireo?
4 Moa ve miasa amin'ny fihenan-danja?
Inona no idirany?
Rehefa atao sakafo ara-dronono, Ny zava-pisotro toy ny ranom-boankazo sy legioma, dite raokandro, ron-kena ary malama dia manolo ny sakafo mahazatra amin'ny habetsaky ny telo na efatra isan'andro. Indraindray koa avela mandray gelatin.
Ny karazan-tsakafo fanarahana ranoka arahin'asa dia miankina amin'ny filan'ny olona tsirairay avy. Ny fisotroan-dronono sasany dia soloina ranoka ny sakafo rehetra isan'andro, fa ny iray kosa soloina iray na roa monja. Amin'ireo tranga ireo dia matetika dia sakafo maraina sy atoandro. Sakafo ara-pahasalamana ny sakafo hariva.
Misy ireo orinasa mivarotra fikororohana hisolo ny sakafo. Ity karazan-tsakafo ranoka ity dia matetika ny dingana voalohany amin'ny drafitry ny fihenan-danja. Taty aoriana dia averina averina tsikelikely ny sakafo matanjaka. Misy ihany koa ny sakafo ara-dronono malaza ho an'ny tanjona detoxifying. Amin'ity kinova ity dia ny zava-pisotro fotsiny izay omena ny hery hanafoanana ireo zavatra misy poizina ao amin'ny vatana no raisina, saingy tsy raisina ho salama izany noho ny tsy fahampian'ny otrikaina.
Farany, ny dokotera dia mety hanome soso-kevitra amin'ny fihinanana ranoka alohan'ny aorian'ny fandidiana sasany. Misy karazany maromaro, ny sasany henjana kokoa ary ny hafa kely noho ny rano avela. Ohatra iray amin'izany ireo olona matavy loatra izay mila mahatratra lanja azo antoka alohan'ny handraisana karazana fandidiana, anisan'izany ny fandidiana fandanjana lanja. Ny sakafo ara-tsiranoka dia mety hahasoa ihany koa rehefa ilaina ny manolotra fitsaharana amin'ny rafi-pandevonan-kanina. Ny episodes amin'ny fandoavana na fivalanana dia ohatra iray.
Ampy sakafo ve izy ireo?
Alohan'ny hanombohana sakafo dia ilaina ny manontany tena amin'ny tenanao hoe: ampy ve ny sakafo? Raha ny fisotroan-dronono, ilaina ny miantoka fa ny zava-pisotro dia manome 100% ny otrikaina rehetra ilain'ny vatana mandritra ny andro, indrindra rehefa misolo ny zava-pisotro ny sakafo rehetra isan'andro.
Na dia afaka manao sakafo ara-dronono samirery aza ny olona rehetra dia tsara ny mitady fanaraha-maso ara-pitsaboana ho an'ny fiarovana, indrindra raha ny momba ireo kinova ambany kaloria. Ary ireo dia zara raha manome proteinina, gliosida, tavy, vitamina ary mineraly amin'ny sakafo voalanjalanja sy mahasalama, izay mety hiteraka voka-dratsy hafa, tena mampidi-doza tokoa. Ny fisotroan-dronono tsy mamela ny sakafo matanjaka dia mety tsy hahavelona anao amin'ny otrikaina ilaina.
Milamina ve izy ireo?
Miresaha amin'ny dokotera raha mety aminao ny fisotroan-dronono.. Ary koa, mba hilamina ity sakafo ity dia tokony hatao eo ambany fanaraha-mason'ny matihanina, indrindra ny kinova kaloria ambany. Ankoatry ny famoronana sakafo mety aminao, ny asan'ny mpitsabo indrindra dia ny manara-maso sy manome antoka fa mahazo kaloria sy otrikaina ilaina ianao mandritra ny fihinanana ranoka. Anisan'izany ny famenon-tsakafo.
Ny sakafo fisotro misy rano azo antoka indrindra dia ireo izay tsy dia ambany be ny kaloria ary misy sakafo matanjaka iray na roa isan'andro. Ny antony dia avelan'izy ireo hihena tsikelikely sy hihena ny fihenan-danja, izay mampitombo ny fahafaha-mihena maharitra. Ny sakafo mahavoky dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterahana ireo tanjona ireo.
kosa, ny fisotroana rano fotsiny mandritra ny fotoana maharitra dia tsy heverina ho azo antoka. Marihina fa tsy tsara ny manaraka sakafo ara-dronono rehefa tratry ny aretina mitaiza. Izy ireo koa dia tsy heverina ho azo antoka ho an'ny vehivavy bevohoka na mitaiza.
Moa ve miasa amin'ny fihenan-danja?
Ny fanarahana karazana sakafo misy ranoka dia mety hanampy anao hihena. Toy ny drafitra fampihenana ny lanja rehetra, ny lakileny dia ny fandoroana kaloria betsaka kokoa noho ny laninao. Ary ireo karazan-tsakafo ireo matetika dia manampy amin'ny fanatanterahana izany takiana izany.
Fa ny ankamaroany dia tsy natao harahina mandritra ny fotoana maharitra. Noho izany, ahiana ny hamerina ny lanja very aorian'ny famitana ny sakafo ranona ary miverina amin'ny fiainanao mahazatra. Ny valiny dia mazàna tsy maharitra ela satria nitranga izy ireo noho ny fihenan'ny kaloria voadoka fa tsy tamin'ny fiovan'ny fahazarana mihinana.
Na izany aza, misy sakafo fisotro ranon-javatra tsara kokoa noho ny hafa amin'ity lafiny ity. Ny tena mahomby sy atolotra ho an'ny olona matavy loatra dia ireo izay manampy amin'ny fifehezana ny ampahany sy ny isan'ny kaloria isan'andro. Ireo no kinova kely tsy dia henjana, izay manambatra ny tsiranoka amin'ny sakafo matanjaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo ara-dalàna
Ahoana ny fakana chia